Katidral Florence | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Florencia, Ihe ị ga-ahụ
Florencia ọ bụ otu n'ime ndị kasị maa mma obodo na Italy. Ọtụtụ mmadụ na-aga ụbọchị abụọ ma ọ bụ atọ na njem ogologo karịa na mba ahụ, mana ana m akwado ịnọ ogologo oge. I nwere ọtụtụ ihe ị ga-ahụ! Ma ọ bụ naanị, ịnwere ike ịgbazite igwe kwụ otu ebe ma jee maka ịgagharị n'okporo ámá ya.
Otu n'ime ụlọ ihe nnọchianya nke obodo bụ Katidral Florence. Ọ mara mma, mana ọ bụghị nke na-egbu maramara. Ihe kachasị adọrọ mmasị nke ọ nwere na nke m na-akwado ịghara ịkwụsị ime bụ ịgbago site na agbagọ n'ime ya ihu na dome na site ebe ahụ, na-ekpori ndụ n'echiche dị ebube nke obodo na gburugburu ya.
Ewu ya bidoro na 1296 wee kwụsị na 1436. N'oge ahụ, owuwu nke nnukwu ụlọ ndị dị otú ahụ were oge. You gụrụ Ogidi nke ụwa? nke Ken Follet dere. Akwụkwọ ahụ kọwara nke ọma ogologo oge na usoro mgbagwoju anya nke iwu ụlọ nwere njirimara ndị a.
Katidral anyị na-ahụ taa, site na Santa Maria del Fiore, nọchiri chọọchị nke gara aga nke na-enyekwaghị ihe zuru ezu maka ọnụ ọgụgụ na-eto eto nke obodo ahụ. A rụrụ ụlọ ọhụrụ ahụ site na Arnolfo di Cambio, onye na-ese ụkpụrụ ụlọ na onye omenkà Tuscan onye mekwara Palazzo Vecchio na Church of Santa Croce. Mana Arnolfo nwụrụ na 1310, mgbe ọ rụchara ọrụ afọ iri atọ, yabụ ọkwa ya were ya Giotto na mgbe ọ nwụrụ, na 1337, ọ bụ onye na-enyere ya aka Andrea Pisano placeholder oyiyi, onye gara n'ihu.
Ọ bụghị naanị ha bụ ndị na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ na-elekọta ọrụ ahụ ka Pisano nwụrụ site na Ọnwụ Ojii afọ iri ka nke ahụ gasịrị, ka owuwu ahụ gbasara oge ndị ọzọ na-ese ụkpụrụ ụlọ gbasoro atụmatụ ahụ ma nyekwa aka ha. N'ikpeazụ, Pope Eugene nke IV doro ya na Machị 1436. Kedu ka ụka dị?
Ọ bụ basilica na a Central nave na anọ bays na izugbe imewe nke latin cross. Ọ bụ nnukwu ụlọ nsọ, 8.300 square mita, mita 153 na 38 mita n'obosara. Ngwurugwu ndị dị na paseeji dị 23 mita n'ịdị elu na ịdị elu nke dome ahụ bụ mita 114.5. Na dome no yɛ ahobammɔ bere mpo a na wadi mfe anum a wɔresi asɔrefi no, na n'ahoɔfɛ no nni mu. E nwere naanị ihe nlereanya ahụ, mara mma na akụkụ ya na octagonal design.
Wo dometɔ akpa gãtɔ nye xɔlɔ and vavãwo Brunelleschi. Ọbụna ọ nwere okomoko nke ịga n'ihu ma nwee ike ịnwụ ọkụ ọkụ n'elu dome. Ya mere, ejiri okpueze ọla kọpa na obe nke nwere ihe dị nsọ dị nsọ kpuchie elu ụlọ ahụ.
Site na mma a, dome ahụ ruru ogo ikpeazụ nke 114.5 mita. Lightning kụrụ bọl ọla kọpa na 1600 mana ejiri nke ka ukwuu dochie ya obere oge. ekwenyere na ọbụnadị bọọlụ ọla kọpa a ka nwa okorobịa mere Leonardo da Vinci, na n'oge ahụ ọ na-arụ ọrụ na ogbako ahụ nke na-elekọta ya. Agbanyeghị, ọmarịcha.
N'aka nke ọzọ, mbụ façade bụ nsonaazụ nke ọrụ nke ndị na-ese ihe dị iche iche ma wepụrụ ụfọdụ ọrụ mbụ na oge Franceso I de Medici mgbe a gbanwere ya na usoro Renaissance. Enwere ọtụtụ ntụgharị na ntụgharị ruo na narị afọ nke XNUMX façade fọrọ nke nta ka ọ gba.
Taa façade dị na neo-Gothic, in acha ọcha, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na mabul uhie. O kwekọrọ n'ụlọ elu mgbịrịgba ahụ na ebe a na-eme Baptism ma dịkwa mfe. Nnukwu ọnụ ụzọ ọla E debere ha na mmalite narị afọ, site na XNUMX ruo XNUMX, ma na-anọchite anya ihe nkiri sitere na ndụ nke Virgin.
Enwere mosaics n’elu ha na ụfọdụ ihe enyemaka dị n’okpuru. Ọzọkwa n'elu ọnụ ụzọ ahụ, e nwere usoro niche na ndịozi iri na abụọ ahụ na n'etiti, Virgin na Nwa Jesus. Na n'etiti windo rose na tympanum ọzọ gallery nwere busts nke ndị ọrụ Florentine.
Ọ bụrụ na mputa dị mfe ma ọ bụghị nke chromatic, otu ahụ bụ ime. Ọ dị nnukwu ma ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ị ga-ahụ, mana enwere onwe ya ịbanye n'ihi ya enwere ndị mmadụ mgbe niile. Ha na-enwu, ee, ha 44 windo nwere ikoNnukwu maka oge ha, na-egosi ihe nkiri sitere na Agba Ochie na Agba Ọhụrụ. Na crypt Ee enwere ike ileta ya ma ị ga - ahụ mkpọmkpọ ebe Rome, mkpọmkpọ ebe nke katidral ochie ọzọ na ili nke Brunelleschi.
A na-eji ihe nkiri nke Ikpeazụ Ikpeazụ emejupụta dome ahụ site n'aka Giorgio Vasari, ọ bụ ezie na ọ bụ otu n'ime ụmụ akwụkwọ ya sere ya Zuccari. Dị ka m kwuru na mbụ, na mmalite nke post, rịgoro n'ime ruo n'elu ihe niile wee pụọ n'èzí Ọ bụ ihe ị na-ekwesịghị ịkwụsị ime. Ga-enwerịrị ike ịrịgo 463 nzọụkwụ ma na-agbagọ n'okporo ụzọ wara wara ebe ị na-ezute ndị mmadụ na-aga n'akụkụ ọzọ.
Ihe dị mma bụ na ị nwere ike mepee nleta ahụ n'ihi na dome meghere n'oge ndị ọzọ. Ọ na-eme ya site na elekere asatọ nke ụtụtụ ruo elekere asaa nke mgbede ọ bụ ezie na emechiri ya na ezumike.
Ozi bara uru ileta Katidral nke Florence
Oge mmeghe: mepee Mọnde, Tuesday, Wenezdee na Fraịdee site na elekere iri nke ụtụtụ ruo ise na mgbede. Tọzdee mepere site na 10 ruo 5: 10 elekere, dabere na ọnwa; Na Saturday, ọ na-emeghe site na 3 ruo 30: 10 na Sunday na Sọnde na ezumike na-emeghe site na 4: 45 ruo 1: 30pm. Emechiri na Jenụwarị 4 na 45, Ista na Krismas.
Ahịa: tiketi na-efu euro 18 kwa okenye. Betweenmụaka nọ n’agbata afọ 6 na 11 na-akwụ euro atọ na ụmụaka anaghị akwụ ụgwọ. Tiketi ahụ gụnyere nleta na katidral, ebe a na-eme baptizim, crypt, ụlọ mgbịrịgba na Museo della Opera.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Florencia » Katidral Florence
London akara ngosi
Ihe ị ga-ahụ na Genoa